mercredi, 06 septembre 2017 21:29
Antaninarenina: Marathon international de Tana 17è édition
Nampafantarina tetsy amin’ny hotel Colbert Antaninarenina ireo Atleta handray anjara amin’ny marathon international de Tana andiany faha 17 izay hatao amin’ny faha 14 sy 15 oktobra ho avy izao, izay hiainga eny amin’ny Parvis lapan’ny Tanana Analakely.
Anisan’ny Atleta handray anjara amin’izany I ANDRIAMPARANY Fenosoa Harivelo Hajanirina, izay avy ao amin’ny COSFA, i RATIANARISOA Landinirina COSPN ary RATSARARAY RASAMIMANANA Solomon izay avy ao amin’ny ASCU.
Ny WTC moa no mikarakara ity lalao ity eto Antananarivo ary efa manomboka ny fisoratana anarana amin’ireto toerana ireto
VIMA Ankorondrano, FMA Stade Alarobia, ORTANA Jardin Antaninarenina.
mercredi, 06 septembre 2017 21:17
IARA- Vangaindrano: Fahafatesana mampiahiahy
Mahalasa saina ny maro ny trangan-javatra ao amin'ny Kaominina ambanivohitr'i Iara ato amin'ny Distrikan'i Vangaindrano tao anatin'ny roa taona izay satria dia matetika misy ny fahafatesana eo amin'ireo tomponandraikitra ara-panjakana ao an-toerana.
Telo volana taorian'ny nahavoafidy azy, ny Ben'ny tanana lanim-bahoaka tao dia nindaosin'ny fahafatesana. Afaka fotoana elaela taty dia nisy PDS voatendry ka tsy ampy telo volana ny nahavoatendry azy dia nodimandry ihany koa.
Izao indray ny sabotsy hifoha alahady 03 septambra teo dia ny lehiben'ny Boriboritany ao amin'io Kaominina io indray no nindaosin'ny fahafatesana, nefa vao efa-bolana no nahatongavan'io niasa tao.
Asa na fifandrifin-javatra na loza efa ho avy fa dia tsy mazoto ireo solontenam-panjakana hapetraka any manoloana ireo tranga ireo.
mercredi, 06 septembre 2017 21:10
Asa tanana: Fanamboarana Fitombo-kase
Anisan’ny asa tanana efa be mpanao ny asa Fitombo-kase na ny (cachet).
Efa maro ireo manao ity asa tanana ity ka tsy dia mandeha loatra ny fidiram-bola araka ny filazan’ity lehilahy iray mpanao cachet etsy Antaninarenina ity, matetika aza dia miantso ireo olona mandalo hanao na hividy izany izy ireo.
Dimy arivo ka hatramin’ny dimy arivo sy iray alina eo ny manao izany, misy ireo manao commande ary anisan’izany ireo orin’asa lehibe.
Manodidina ny totohabaton’Antaninarenina sy andohan’Analakely no ahitana azy ireo.
mercredi, 06 septembre 2017 20:00
Tanjombato: Foire interantionale de l'agriculture
Ho tanterahina amin’ny 14 septambra ho avy izao eny amin’ny FORELLO EXPO Tanjombato ny FOIRE INTERNATIONALE DE L’AGRICULTURE izay tsy hifarana raha tsy ny 17 septambra ho avy izao.
Andiany voalohany izy ity, izay karakarain’ny Ministera fambolena sy ny fiompiana ary ny Agence Première ligne.
Izy ity dia natao mba hivondronan’ireo mpandraharaha indrindra mahakasika ny fambolena.
mercredi, 06 septembre 2017 14:45
Pont FITIM: Itrangana lozam-pifamoivoizana mila ho isan-kerinandro
Mbola Bajaj indray ity potika tanteraka ity noho ny fisetrasetrana, sady efa nisongona anaty fiolahana no mbola mangalatra ankavanana ny mpamily ihany ka tsy nijanona raha tsy tany amin'ilay hady kely teo antsisin-dalana, rehefa niala satria saika nifandona tamin'ny Bajaj hafa.
Teo amin'ny Pont FITIM – Mahajanga no nisehoan'io lozam-pifamoivoizana io ny maraina teo tokony ho tamin'ny 10 ora sy sasany. Naratra ny mpamily ary soa ihany fa tsy nitondra mpandeha.
Misy hatrany ny lozam-pifamoivoizana manodidina io toerana io isan-kerinandro ary saika Bajaj sy moto hatrany no mitera-doza.
Amin'ny ankapobeny, na fisetrasetrana na fahamamoana sy tsy fanarahan-dalàna no mahatonga ny loza. Ankavitsiana amin'ireo loza ireo no vokatry ny olana ara-teknika.